သူမ စိတ်မပါရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ? – Gentleman Magazine
သူမ စိတျမပါရငျ ဘာလုပျကွမလဲ ?
နှစ်ဦးသား ချစ်တင်းနှောဖို့ကိစ္စကို သင်က စိတ်ပါနေမယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဒါမှမဟုတ် သူမက စိတ်ပါနေပြီး သင်က………. စိတ်မပါတဲ့အချိန်များ ရှိလို့လား။ အမြဲတမ်းတက်ကြွနေတတ်တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ပါတနာမိန်းကလေး စိတ်မပါဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း လည်တိုင်လေးကို အနမ်းလေးတွေပေးပြီး၊ တစ်ချို့နေရာလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့မရပဲ သူမဖက်က ငြင်းဆန်နေဦးမယ်ဆိုရင် လက်ခံလာအောင် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
အရင်ဆုံးသိထားရမှာက ဒီလို မိန်းကလေးဖက်က စိတ်မပါပဲ ငြင်းဆန်တာမျိုးက Desire discrepancies (စိတ်ဆန္ဒခြင်းမကိုက်ညီမှု)လို့ ခေါ်ဆိုပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ လေ့လာမှုတွေအရ လူ(၁၀၀)မှာ (၈၀)လောက်က ဒီအခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ချစ်တင်းနှောဖို့ စိတ်မ၀င်စားတာဟာ ဒီကိစ္စထက် အခြားနီးစပ်မှု၊ ချစ်ခင်တွယ်တာမှုတွေကို အလိုရှိတာကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်နေကုန်စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူမ စိတ်မပါတာကို သိရက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ချစ်တင်းနှောဖို့ အတင်းကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ လုပ်သင့်တာက သူမနဲ့ စကားပြောဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ပါ။ သူမစိတ်ပါလာအောင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာလိုမျိုး ဒဲ့ဒိုးမေးချလိုက်လို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းတွေ အမေးခံရတဲ့အခါမှာ သူမအတွက် စဉ်းစားချိန်ပိုရပြီး စိတ်တင်းကျပ်မှုတွေ လျော့ပါးသွားစေနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမက ဆက်လက်ငြင်းဆန်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကိုထိန်းပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အတွက် ကြိုခွင့်တောင်းတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြုအမူမျိုးက ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အတူမနေဖို့ လက်ခံလိုက်ကြောင်းနဲ့ သူမကို စိတ်မပျက်ကြောင်း၊ နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ချစ်တင်းနှောဖို့ မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးဖက်က စိတ်မပါတာကို အသိအမှတ်ပြုပြီး နားလည်ပေးလိုက်တာက နောက်တစ်ကြိမ်မှာ သင့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင် လိုက်လျောပေးဖို့ သူမကို လှုံ့ဆော်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးဘက်က စိတ်မပါချိန်တွေမှာ နားလည်ပေးပြီး သူမ စိတ်ပါလာချိန်ကို စောင့်စားနေကြောင်းကို ပြေပြေလည်လည်ဖော်ပြပါ။ နောက်တစ်ကြိမ် သင်တောင်းဆိုရာမှာ တကယ်ကောင်းတာတွေပဲ ကြုံတွေ့ရမှာ သေချာပါတယ်။
နှဈဦးသား ခဈြတငျးနှောဖို့ကိစ်စကို သငျက စိတျပါနမေယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမက စိတျမဝငျစားဘူး။ ဒါမှမဟုတျ သူမက စိတျပါနပွေီး သငျက………. စိတျမပါတဲ့အခြိနျမြား ရှိလို့လား။ အမွဲတမျးတကျကွှနတေတျတာပဲ မဟုတျလား။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ပါတနာမိနျးကလေး စိတျမပါဘူးဆိုရငျ ဘယျလိုရှဆေ့ကျကွမလဲ။ တဈခါတဈလကေတြော့လညျး လညျတိုငျလေးကို အနမျးလေးတှပေေးပွီး၊ တဈခြို့နရောလေးတှကေို ပှတျသပျပေးလိုကျရုံနဲ့ အဆငျပွသှေားနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့မရပဲ သူမဖကျက ငွငျးဆနျနဦေးမယျဆိုရငျ လကျခံလာအောငျ လုပျဆောငျသငျ့တဲ့နညျးလမျးလေးတှေ ရှိနပေါတယျ။
အရငျဆုံးသိထားရမှာက ဒီလို မိနျးကလေးဖကျက စိတျမပါပဲ ငွငျးဆနျတာမြိုးက Desire discrepancies (စိတျဆန်ဒခွငျးမကိုကျညီမှု)လို့ ချေါဆိုပွီး ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတယျဆိုတာပါပဲ။ လလေ့ာမှုတှအေရ လူ(၁၀၀)မှာ (၈၀)လောကျက ဒီအခွအေနမြေိုး ကွုံတှရေ့တတျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မိနျးကလေးတဈယောကျက ခဈြတငျးနှောဖို့ စိတျမဝငျစားတာဟာ ဒီကိစ်စထကျ အခွားနီးစပျမှု၊ ခဈြခငျတှယျတာမှုတှကေို အလိုရှိတာကွောငျ့သျောလညျးကောငျး၊ တဈနကေုနျစိတျရောလူပါ ပငျပနျးနတေဲ့အတှကျကွောငျ့သျောလညျးကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူမ စိတျမပါတာကို သိရကျနဲ့ မသိခငျြယောငျဆောငျပွီး ခဈြတငျးနှောဖို့ အတငျးကွိုးစားနမေယျဆိုရငျတော့ နှဈယောကျကွားမှာ ပွဿနာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဒီအခြိနျမှာ လုပျသငျ့တာက သူမနဲ့ စကားပွောဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ သူမကို မေးခှနျးလေးတှေ မေးကွညျ့ပါ။ သူမစိတျပါလာအောငျ ဘာလုပျပေးရမလဲ ဆိုတာလိုမြိုး ဒဲ့ဒိုးမေးခလြိုကျလို့လညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလို မေးခှနျးတှေ အမေးခံရတဲ့အခါမှာ သူမအတှကျ စဉျးစားခြိနျပိုရပွီး စိတျတငျးကပျြမှုတှေ လြော့ပါးသှားစနေိုငျတဲ့အတှကျ စိတျပါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမက ဆကျလကျငွငျးဆနျနဦေးမယျဆိုရငျတော့ စိတျကိုထိနျးပွီး နောကျတဈကွိမျအတှကျ ကွိုခှငျ့တောငျးတာက အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဒီအပွုအမူမြိုးက ဒီတဈကွိမျတော့ အတူမနဖေို့ လကျခံလိုကျကွောငျးနဲ့ သူမကို စိတျမပကျြကွောငျး၊ နောကျတဈခြိနျခြိနျမှာ ခဈြတငျးနှောဖို့ မြှျောလငျ့နဆေဲဖွဈကွောငျး ဖျောပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလို မိနျးကလေးဖကျက စိတျမပါတာကို အသိအမှတျပွုပွီး နားလညျပေးလိုကျတာက နောကျတဈကွိမျမှာ သငျ့စိတျတိုငျးကဖြွဈအောငျ လိုကျလြောပေးဖို့ သူမကို လှုံ့ဆျောရာလညျး ရောကျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ မိနျးကလေးဘကျက စိတျမပါခြိနျတှမှော နားလညျပေးပွီး သူမ စိတျပါလာခြိနျကို စောငျ့စားနကွေောငျးကို ပွပွေလေညျလညျဖျောပွပါ။ နောကျတဈကွိမျ သငျတောငျးဆိုရာမှာ တကယျကောငျးတာတှပေဲ ကွုံတှရေ့မှာ သခြောပါတယျ။
Previous: စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း (၉) ခု
Next: အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ